Diyaarad aan Summad lahayn | allsanaag
Diyaarad aan Summad lahayn
Xaaladda gobolku ku jiro yaan loo ogolaan Diyaarado ka soo dega degmada Badhan.
Degmada Badhan ee gobolka Sanaag ma laha garoon diyaradeed ee qalabaysan, shaqaale u tababaran iyo Radaar Diyaaradeed , sidaas awgeed lama ogaan karo Sumadda diyaaradda ka soo degta, meesha ay ka soo kacday iyo waxa ay wado oo ay ku raran tahay, aan ka ahayn waxa loo sheego bulshada reer Badhameed
Marka hore qaybo ka mid ah gobolka Sanaag waxa ku sugan argagixiso caalami ah oo u baahan dhaqaale iyo saanad uga timaada meelo ka baxsan gobolka Sanaag. Waxaana dhici karta in diyaarada lagu sheego inay Qaad wado . hase ahaatee ay faraha kula jirto howlo ka waaweyn Qaadka ,oo ay argagaixiso u raran tahay gacana ay siinayaan ama daah saarayaan maamulka Hargaysa ujeedadda ay diyaaraddu u socoto
Marka labaad Garoonka Badhameed ma laha Raadaar, qalab iyo shaqaale tababaran oo ogaan kara in diyaaraddaha Badhan ka soo degaa ay ka soo kaceen Baydhabooo ah xarunta gobolka Bay ama Beer ee gobolka Togdheer iyo waxa ay ku raran yihiin . Garoonka Badhameed haddii ayna joogin shaqaale xirfad u leh dhaqdhaqaaqa diyaaradaha iyo dhaqanka argagixisada iyagu wixii loo sheegoba waa qaadanayaan
Marka sadexaad dhulka u dhaxeeya Badhan iyo Boosaaso , oo la sheegay in qaadka la sii dhex marinayo maaha dhul ay ciidan joogaan, oo lagu ogaan karo wax la dhigay iyo cid ku degtay. Taasina waxay khatar ku tahay amniga gobolka.
Marka afraad dadka leh garoon diyaaradeed ayaa Badhan ka jira oo shaqaynaya, waa kuwa u shqaeeya, taageera maamulka Hargaysa oo gacanta siiya alshabaabka ku jira Buuraha Calmadow. Waa kooxda ku awr kacsata Majeerteen ayaa cuna qabatayn inagu haya. Waa kuwii arinta Galgala markii ay bilaabantay la saftay maamulka Hargaysa oo maanta gobolka ka dhigay sida uu yahay
Ugu danbayntii Dhalinyarada Badhameed uma baaha qaad ay cunaan sida ay inoo sheegeen ee waaxy u baahan yihiin Garoon kubadeed oo ay jirkooda iyo maskaxdooda ku dhisaan. Bulshada lagu soo duulay ee reer Sanaag ma qabaan baahi diyaaradeed ee waxay u baahan yihiin waa amni sugan si ummadaha kale, taasina waxay ku iman kartaa a in la ilaaliyo dhaqdhaqaaqa gobolka dhanka badda, dhulka iyo Cirka.
Badhan iyo Garoon Diyaaradeed
← Labada Yar Yar Muqdisho Waan ka Xoreeneenaa Farta Beelaha Isaaq →